Zvigadzirwa Vagadziri & Suppliers |China Products Factory
Sheet Metal Laser Kucheka Machine
Tube & Pipe Laser Kucheka Mahine
Dual-kushandisa Sheet & Tube Laser Kucheka Machine
High Power Laser Kucheka Machine
Laser Kumaka Machine
8KW 10KW 12KW High Power CN...
20W 30W 50W 70W 100W CNC La...
1000W 1500W 2000W Handheld ...
Exchange Platform Sheet Met...
1KW 2KW 3KW 4KW Tube pombi Simbi Stainless Steel Fiber Laser Kucheka Machine
1.Iyo laser pombi yekucheka muchina unogona kucheka oblique angles, uye kumhanya kwekucheka kunokurumidza.Michina yekucheka pombi yakajairwa haigone kucheka kona, uye iyo inogona kucheka kona inowanzoita semi-otomatiki pombi yekucheka muchina kana manyorero ekucheka pombi muchina, ine yakaderera kugadzira.
2.Basa racho rine simba rakati, rinogona kucheka makomba akaenzana uye maburi akaenzana nechiuno papombi yakatenderera, inogona kucheka mapatani akasiyana-siyana pamusoro pepombi yechikwere, inogona kucheka chiso che oblique pamagumo epombi yakatenderedza, uye inogona kudzika. uye rova ​​maburi.Iyo yakajairika pombi yekucheka muchina ine basa rimwechete uye ine chete basa rekucheka.
300W 150W 80W 50W CO2 Laser Engraving yekucheka Machine 6040
Iyo GC yakatevedzana co2 yekucheka muchina inotora iyo yepamusoro yekudzora sisitimu muindastiri, inowedzera basa rekuenderera mberi nekukurumidza curve yekucheka muchina, uye basa repfupi kugadzirisa nzira optimization, iyo inovandudza zvakanyanya kushanda zvakanaka.Iyo yakashongedzerwa neyepamberi otomatiki graphic recognition system kuti iite zvizere otomatiki kushanda.
20W 30W 50W 70W 100W CNC Laser Kumaka Muchina Wesimbi
Fiber laser yekumaka inonyanya kushandisa musimboti welaser thermal athari, iyo inoshandisa musimboti wekupisa pamusoro pechigadzirwa chebasa nekupisa kwakanyanya kunogadzirwa nelaser kugadzira chiratidzo chechigadzirwa.Inonyanya kukodzera kumaka zvinhu zvesimbi uye zvimwe zvinhu zvepurasitiki.
1000W 2000W 3000W 4000W 6000W Metal Sheet Fiber Laser Kucheka Machine Kwesimbi
Mirayiridzo yekushandisa inosanganisira mirairo yekushanda kwakachengeteka, kutarisa kwechigadzirwa, kurongedza uye chekufambisa, kuisa uye kutumira mirairo, mirairo yekushanda, kugadzirisa kwemidziyo uye kugadzirisa matambudziko, mirairo yewaranti, nezvimwe.
Kugadziriswa kwechigadzirwa chezuva nezuva: chenesa sefa yekunze yeinotonhorera yemvura, tsiva inotonhorera, chenesa guruva rekunze remusoro welaser, tsiva lenzi, tsiva muromo, wedzera mafuta ekuzora, nezvimwe.
Shandura Platform Sheet Metal CNC Laser Yekucheka Machine Yekucheka Simbi
Kubwinya Laser inopa siyana dzakatevedzana zvigadzirwa kuitira kugutsa vatengi' nzwisisika zvinodiwa.MuGlorious Laser, kune marudzi mapfumbamwe ezvigadzirwa zvine mabasa akasiyana kubva pa1000 watts kusvika 15000 watts kugutsa zvinodiwa nevatengi zvakasiyana mukucheka simbi pasi pemhando dzakasiyana, maumbirwo, saizi uye ukobvu hwepamusoro.
Yese Kavha Yekuchinjana Platform Uye Tube Sanganisa Laser Yekucheka Muchina
Laser yekucheka michina inoshandiswa zvakanyanya mushizha simbi kugadzira, njanji yekufambisa, mota, michina yekuvaka, yekurima uye masango muchina, kugadzira magetsi, kugadzira elevator, midziyo yemumba, muchina wechikafu, machira emuchina, kugadzira maturusi, michina yepetroleum, muchina wechikafu, kitchenware uye. imba yekugezera, yekushongedza kushambadzira, Laser ekunze kugadzirisa masevhisi, nezvimwe.
Sanganisa Exchange Platform neTube Laser Yekucheka Machine
Chigadzirwa chacho chinotora gantry double-drive structure, mubhedha ndeye integral weldment, yakavharirwa zvizere chimiro, ine kaviri kuchinjana kushanda mapuratifomu, Z-axis yakareruka muhuremu, uye ine yakanaka dynamic performance.Ose ari maviri akakasharara akagadziriswa mushure mekuvharwa uye akaiswa kune yechipiri vibration kurapwa kuchembera.
Sanganisa Sheet Platform neTube Laser Kucheka Machine
Kucheka tafura: Inogadzirwa nekutungidza iyo yese square pass, uye imwe neimwe node inotora yakakura gobvu keel kuti ive nechokwadi chekushandiswa kwenguva refu, mubhedha hauputsi, uye chimiro chakagadzikana.
8KW 10KW 12KW Yakakwirira Simba CNC Laser Yekucheka Muchina Wesimbi
Kazhinji, chimiro chepamusoro-simba laser yekucheka muchina yakakura, uye simba racho rakakura, uye sarudzo yelaser inofanira kusarudza laser yekambani huru yemumba, nekuti ma lasers emakambani madiki anotengwa kubva kune mamwe makambani makuru. , saka Pakupedzisira, zvakanyanya kukodzera kutenga zvakananga kubva kune kambani huru.Uye maererano nesimba, inogona kusvika ku1000W, 2200W, 3000W.Idzi sarudzo dzinochinjika.Iyo sheet metal zvinhu mushure mekucheka nesimba rinopfuura kilowatts zvirokwazvo haisi dambudziko.
Yese Kavha Yekuchinjisa Platform simbi CNC Laser Kucheka Machine
1.Kuenzaniswa nekucheka kweplasma, kucheka kwelaser kwakanyatso kujeka, nzvimbo inobatwa nekupisa idiki, uye kutsemuka kuri kudiki.
2.Kana iwe uchida kucheka chaiko, madiki ekucheka seams, diki kupisa-yakakanganiswa nzvimbo, uye diki pepa deformation, zvinokurudzirwa kusarudza laser yekucheka muchina.
3.Kucheka kweplasma kunoshandisa mhepo yakamanikidzwa segasi rinoshanda uye yakakwirira-tembiricha uye yakakwirira-kumhanya plasma arc senzvimbo yekupisa kunyungudutsa simbi yakachekwa zvishoma, uye panguva imwechete inopeperetsa simbi yakanyungudutswa nemhepo inomhanya-mhanya kuita kucheka. .
1000W 1500W 2000W Handheld Laser Welding Machine YeSimbi Stainless Simbi
Laser welding ndiko kushandiswa kweakakwira-simba laser pulses kudziya munzvimbo inodziya zvinhu munzvimbo diki uye nekuchenjera kupedzisa shanduko yezvinhu.Simba remalaser radiation rinopararira mukati mezvinhu kuburikidza nekupisa conduction nekukurumidza, uye zvinhu zvacho zvinonyungudutswa kuita dziva rakanyungudutswa.
Nhamba 227, Jiangdu Road Weifang Shandong China
Laser Cnc Machine Kutengeswa, Zvishongo Welder, Carbon Fiber Laser Cutter, Automatic Laser Welder, Sheet Metal Laser Cutter, Laser Cnc Machine,